यस्तो हो देउवाको गृहजिल्लाको विवाद, फस्दै गए मल्ल - Dainik Nepal
यस्तो हो देउवाको गृहजिल्लाको विवाद, फस्दै गए मल्ल
दैनिक नेपाल २०७८ भदौ २८ गते १२:१७
काठमाडौं, २८ भदौ । डडेल्धुरा जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन् ।
वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवालाई जोडर नानाथरीका आक्षेप लगाउने कार्यहरू भइरहेका छन् ।
डडेल्धुराका ४१ वटा वडामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । ९ वटा वडा बाहेक सबै वडामा सर्वसम्मत रुपमा वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन भएका छन् । अब २ वटा वडा अधिवेशन गर्न बाँकी छ । डडेल्धुरा जिल्लामा ५२ वटा वडाहरू छन् ।
निर्वाचन समितिले वडा अधिवेशनहरूमा ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म क्रियाशीय सदस्यतहरूको सहभागितामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
डडेल्धुराका जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले वडा अधिवेशनमा आफूहरू सहभागी नभएको बताएका छन् । उनले क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका कारण केन्द्रीय कार्यालय सानेपा र क्रियाशील सदस्यता वितरण छानविन समितिमा उजुरी दिएको बताएका छन् ।
जिल्ला सभापति मल्लले क्रियाशील सदस्यताको विवादमा सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
तर, देउवाले डडेल्धुराको विवादमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान छानविन समितिका सदस्य एवम् केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले बताए ।
‘डडेल्धुराको क्रियाशील सदस्यता वितरणको विवादमा सभापति शेरबहादुर देउवाले हामीलाई कुनै पनि दवाव दिनुभएको छैन । फोन गरेर डडेल्धुराको विवादमा हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन’, चौधरीले भने, ‘समितिबाट हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरेर डडेल्धुराको क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गरेर पठाएका हौँ ।’
डडेल्धुरा जिल्लामा १३औँ महाधिवेशनमा २८ सय ६८ जना क्रियाशील सदस्य थिए । कांग्रेसले जुन जिल्लामा जति क्रियाशील सदस्य छन् त्यसमा दोब्बदर (शत् प्रतिशत) हुने गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । सोही मापदण्ड अनुसार सबै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको चौधरीले बताएका छन् ।
‘डडेल्धुरामा १३औँ महाधिवेधनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २८ सय ६८ जना क्रियाशील सदस्य छन् । कांग्रेसले शत् प्रतिशत क्रियाशील सदस्यता दिने मापदण्ड बनायो’, चौधरीले भने, ‘डडेल्धुरामा पनि क्रियाशील सदस्यताका लागि फारमहरू दोब्बर गयो ।’
पार्टी नीति र मापदण्डअनुसार डडेल्धुरा जिल्लामा २५ सयको हाराहारीमा क्रियाशील सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण भएको थियो ।
चौधरीले भने, ‘नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूलाई त्यही संख्यामा सदस्यता दिने भन्ने पार्टीको नीति र मापदण्डअनुसार २५ सयको हाराहारीमा सहमतिमा क्रियाशील सदस्यता दिने सहमति भयो । केन्द्रबाट फराम पठाइएको हो ।’
केन्द्रबाट पठाइएको २८ सयमध्ये करीव ३०८ सय फारम बचेको थियो । बचेको फारमलाई डडेल्धुरा कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमितिले निर्णय गरेर वितरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सभापति मल्लले वितरण नगर्ने भनेर राखिएका ३०८ वटा फारमलाई जिल्ला कार्यसमितिबाट निर्णय नै नगराइ आफू कमजोर भएका वडाहरूमा सुट्याकसुटुक वितरण गरेको आरोप छ ।
जिल्ला कार्यसमितिको निर्णय बिना सहमति बेगर सभापति मल्लले आफू कमजोर भएका वडाहरूमा ३०८ वटा क्रियाशील सदस्यताको फारम वितरण गरेपछि त्यहिँबाट विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
सभापति मल्लले एकलौटी रुपमा वितरण गरिएको ३०८ वटा क्रियाशील सदस्यताको फारम भरेर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता भर्ने वेबसाइटमा सुटुक्क भरेका थिए । त्यसपछि सभापति मल्लको सो हर्कतविरुद्ध डडेल्धुरा कांग्रेसका नेताहरूले केन्द्रमा लिखित उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले सभापति मल्लद्वारा एकलौटी रुपमा मनोमानी तरिकाले वेबसाइटमै राखिएका ३०८ जना क्रियाशील सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो ।
सभापति मल्लले आफूले पठाएका ४६० जना क्रियाशील सदस्यता काटेर ३०४ जनालाई केन्द्रबाट थपेर पठाएको दाबी गरेका छन् ।
सर्वसम्मति निर्णय गर्ने छानविन समितिमा सभापति देउवाका मात्रै मान्छे छैनन् । समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूका पनि मान्छे छन् । डडेल्धुरा कांग्रेसभित्रको विवादका विषयमा सबै नेताहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ ।
तर, १४औँ महाधिवेशनमा कुनै पनि एजेण्डा नभएपछि महाधिवेशनलाई नै असर पर्ने गरेर गतिविधि भइरहेको चर्चा हुन थालेको छ ।
३०८ वटा क्रियाशीय सदस्यता खारेज भएपछि आत्तिएका सभापति मल्लले डडेल्धुरामा बखेडा झिकेर १४औँ महाधिवेशनलाई समेत बिथोल्ने हर्कत गरेको आरोप लागेको छ ।
डडेल्धुरामा माओवादी केन्द्र छाडेर कांग्रेसमा प्रवेश गरेका जनकराज कलौनीलाई उप–सभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको समायोजन समितिले नै १ हजार क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो । कलौनीलाई २६५ जना क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ । उप–सभापति निधिलाई पनि डडेल्धुरा कांग्रेसको भित्री कुरा राम्रोसँग जानकारी छ ।
डडेल्धुरा जिल्लामा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिन, स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने, समर्थक र प्रस्तावक बन्ने २०÷२५ जनाको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएको छैन । उनीहरूको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले खारेज गरिदिएको छ ।
डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाको वडा नं. ५ र नवदुर्गा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ गरि दुई वटा वडामा मात्रै विवाद छ । त्यो विवाद पनि क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति टुंग्याउने चरणमा छ ।
समितिका सदस्य चौधरीले छानविन समितिले सर्वसम्मत पास गरेको क्रियाशील सदस्यताको विवाद किन उठेको हो आफूले बुझ्न नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मेरो जिल्ला हेरिदेउ भनेर एक पटक पनि फोन गर्नुभएको छैन । मिलिसकेका कुरालाई अनावश्यक रुपमा उचाल्दा महाधिवेशनको मुखमा महाधिवेशनको वातावरण विथोलिनेमा चिन्ता बढेको छ ।’
डडेल्धुरामा निर्वाचन गराउन गएका निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर बमलाई जिल्ला सभापति मल्लले वडा अधिवेशन रोक्न दवाव दिएका थिए । जवाफमा सभापति मल्लसँग निर्वाचन अधिकृत बमले वडा अधिवेशन रोक्नका लागि लिखित पत्र माग गरेका थिए ।
तर, सभापति मल्लले वडा अधिवेशन रोक्न पत्र दिएनन् । वडा अधिवेशन रोक्ने पत्र नपाएपछि निर्वाचन अधिकृतले वडा अधिवेशन गराएका थिए ।